Global Voices teny Malagasy » Mibaiko Ireo Ankizy Lehibe Hitsidika Ny Ray Aman-drenin’izy ireo I Shina · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 21 Jolay 2013 2:57 GMT 1	 · Mpanoratra Abby Liu Nandika miora
Sokajy: Azia Atsinanana, Shina, Lalàna, Mediam-bahoaka
Namoaka lalàna iray vaovao nanan-kery nanomboka ny herinandron'ny 6 jolay iny i Shina izay manery ireo ankizy lehibe hitsidika “matetika” ny ray aman-drenin'izy ireo.
Fomban-drazana mafy orina any Shina ny fanajana ireo antitra sy ny fikarakarana ireo ray aman-dreny rehefa mahazo taona izy ireo, nefa ny vanim-potoana ankehitriny dia nametraka fa mandao ny trano ny tanora hanaraka ny olon-tiany sy ny asany. Milaza io lalàna vaovao io fa tokony hikarakara ny “zavatra ara-panahy ilain'ny ray aman-dreniny” ny olon-dehiba ary “tsy hanao tsinontsinona ireo antitra”, nefa tsy manamaritra ny fotoana hitsidihan'izy ireo ny ray aman-dreniny izany na ny sazy ho azon'izy ireo raha tsy voahaja izany.
Natao io lalàna io satria miha-antitra ny vahoaka any Shina noho ny politikan'ny zaza tokana. Nitatitra ny The journal  fa maherin'ny 14 isanjaton'ny vahoakan'i Shina, na vahoaka 194 tapitrisa, no maherin'ny 60 taona, araka ireo antontanisa farany indrindra avy amin'ny Birao Nasionalin'ny Antontanisa. Amin'ny 2030, hiakatra avo roa heny io tarehimarika io.
Ankoatra izay, hatramin'ny 2012, tratran'ny krizy ny rafitra fanomezana ny fisotroan-dronono ao Shina amin'ny fatiantoka 2.9 lavitrisa dollars amerikana . Manahy ireo tanora Sinoa ny amin'ny hangatahana azy ireo hanohana ireo misotro ronono avy ao amin'ny fanjakana.
Nitarika fanarabiana ao anatin'ny vohikala fitorahana bilaogy bitika malaza indrindra ao Shina, Sina Weibo, io lalàna vaovao io, ny maro izay mivazivazy fa azo iadian-kevitra ny fanamafisana io lalàna io ary tokony olana ara-toetsaina mila amporisihana ny fitsidihana ny ray aman-dreny fa tsy tokony ho lalàna hamafisina. Ny sasany nitaraina fa tsy manana fotoana ivelan'ny fotoana fiasana izy ireo hitsidihana ny ray aman-dreniny na dia te-hanao izany aza izy ireo, raha mihevitra kosa ny hafa fa natao io lalàna io mba hamenoana ny olana misy eo amin'ny fanomezana ny fisotroan-dronono any Shina.
Nanoratra  [zh] am-panesoana i “Zhuomo Xiansheng”, ilay olo-malaza ao anaty aterineto :
Sary avy ao amin'ny Sina Weibo 
Tokony hifototra amin'ny fihetseham-po tsy ampoizina ny fifandraisana eo amin'ny fianakaviana. Mahatsikaiky ny fampidirana izany ho ao anaty lalàna; tahaka ny fanerena ny mpifankatia roa hanana fiainana ara-nofo mirindra tsara aorian'ny fanambadiana izany.
Naneho  [zh] fihetseham-po sahala amin'izay ny mpisolovava Yang Lei :
Ny fanontaniana dia hoe ahoana ny atao hampiharana ilay lalàna? Ohatra, ny fanomezana milina firaketana dian-tànana hanamarinana ny fahatongavana?
Nilaza [zh] i “Yu linfeng” fa iray amin'ireo antony namoronana io lalàna io ny fiarovana ara-tsosialy tsy zarizary ao Shina:
Matetika dia ho natokana ho an'ireo mpiasam-panjakana ny fiarovana ara-tsosialy, ny ankamaroan'ny vahoaka tsotra dia tsy manana vola fisotroan-dronono hianteherany.
Nieritreritra  [zh] ny mpanolotra TV, Cao Baoying, fa làlana iray hialan'ny governemanta ny andraikiny io lalàna io:
Amin'ny alalan'ny fanolorany io lalàna io, manindry ny andraikitry ny olom-pirenena manokana [ny governemanta], raha manamaivana ny andraikitry ny governemanta.
Nitondra izao famaranana izao [ zh] ny olona iray mpitsikera ny vaovao ao amin'ny ifeng:
Mety hahomby tanteraka ny fampidirana io lalàna io hanandratana ny fifankatiavana eo amin'ny ankohonana, amin'ny alalan'ny fanerena ireo zanaka hitsidika ny ray aman-dreniny, nefa raha tsy afaka hahena ny sorisorin-tsainy aty ivelany, ahoana ny ho lanjan'io tsy fanampianà “fifankatiavana eo amin'ny ankohonana” io? Ahoana ny fomba hahatsapantsika ny fahamendrehan'io lalàna io?
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2013/07/21/49913/
 2.9 lavitrisa dollars amerikana: http://www.businessweek.com/articles/2012-08-09/chinas-brewing-pension-crisis
 Nilaza : http://weibo.com/1425234887/zEu0qnij4
 Nitondra izao famaranana izao [: http://news.ifeng.com/opinion/special/changhuijiakankan/